Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Delta Air Lines mividy fiaramanidina Airbus A30neo 321 hafa
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fampiasam-bola • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny fanampiana ny fiaramanidina Airbus A321neo dia manamafy ny fanoloran-tenan'ny Delta Air Lines hanolo ny fiaramanidina antitra amin'ny fiaramanidina maharitra sy mahomby kokoa.
Manafatra fiaramanidina Airbus A30neo 321 fanampiny ny Delta Air Lines.
Ny kaomandy vaovao dia mitondra kaody miavaka Airbus avy any Delta ka hatramin'ny 155 A321neos total.
Delta dia mampiseho ny fitarihana tompon'andraikitra ary mametraka latsa-bato matoky tena amin'ny A321neo ankehitriny.
Ny Delta Air Lines dia nanafatra fiaramanidina Airbus A30neo 321 fanampiny hanampiana amin'ny fanatanterahana ny fepetra takian'ny fiaramanidina ho avy. Ny fiaramanidina vao nandidy dia ankoatry ny kaomandin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ho an'ny 125 amin'ny karazany, mitondra ny baiko miavaka avy amin'ny Delta ho 155 A321neos total.
"Ny fanamafisana ireo fiaramanidina ireo dia manamafy ny fanoloran-tenan'ny Delta hisolo ny fiaramanidina taloha ho an'ny fiaramanidina maharitra sy mahomby kokoa ary manome ny traikefa ho an'ny mpanjifa tsara indrindra amin'ny indostria," hoy i Mahendra Nair, Delta Air-dalana,'Filoha lefitra zokiolona - Rohy famatsiana fiaramanidina sy TechOps. "Delta dia mankasitraka ny fiaraha-miasa marobe miaraka amin'ny ekipa Airbus ho fanohanana ny drafi-pampivoarana stratejika, ary manantena ny mbola hiara-miasa mandritra ny fanarenana sy ny sisa."
"Raha toa mipoitra avy amin'ny areti-mandringana ny indostria dia mampiseho fahaiza-mitarika tompon'andraikitra i Delta ary manome valim-pifidianana matoky azy ankehitriny amin'ny A321neo," hoy ny fanamarihana Christian Scherer, Lehiben'ny tompon'andraikitra ara-barotra ary Lehiben'ny Airbus International. "Miaraka amin'ny baiko amina fiaramanidina 30 fanampiny izay be fangatahana erak'izao tontolo izao, ny mpiara-miombon'antoka amin'ny Delta dia manasongadina ny andraikitra stratejika hitan'izy ireo ho an'ny A321neo miaraka amin'ny fahombiazan'ny tontolo iainana miavaka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa malaza sy azo itokisana mandritra ny taona maro. amin'ny ho avy. ”
A321neos an'ny Delta dia hampandehanin'ny motera turbofan Pratt & Whitney PW1100G manaraka izay mitondra tombony lehibe amin'ny sidina A321 an'ny Delta izay efa mandaitra. Ampiasaina amin'ny seza feno ho an'ny mpanjifa 194 miaraka amin'ny 20 ao amin'ny Kilasy Voalohany, 42 ao amin'ny Delta Comfort + ary ny 132 ao amin'ny Main Cabin, ny A321neos an'i Delta dia haparitaka manerana ny tambajotram-piaramanidina marobe ananan'ny zotram-piaramanidina, manampy ny fiaramanidina A321 an'ny Delta misy fiaramanidina 120 mahery. Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia voatondro handray ny voalohany amin'ny fiaramanidina 155 A321neo azy amin'ny fiandohan'ny taona manaraka.
Betsaka ny A321neos an'i Delta no halefa ao amin'ny Airbus US Manufacturing Facility in Mobile, Alabama. Ny seranam-piaramanidina dia nahavita nanatitra fiaramanidina Airbus 87 namboarin'i Etazonia hatramin'ny 2016.
Tamin'ny faran'ny volana jolay dia niisa 358 ny fiaramanidina Delbus an'ny Airbus, anisan'izany ny fiaramanidina 50 A220, mpikambana ao amin'ny fianakaviana A240 320, widebodies 53 A330, ary fiaramanidina 15 A350 XWB.